ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၈-၄-၂၀၁၃)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၈-၄-၂၀၁၃)
thein soe said...
Each pictures points out what is happemimg aroumd us.
လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာက .........
-သံဃာတွေ မီးရှို. တာ အပြစ်မရှိ ဘူး ဆိုလိုတာလား ?
-ဒါကတော. ကွိုင် ကြီး ဆိုပြီး ဖယ်ထားတာလား ?
- - - စီမံကိန်း ကြီးက မရပ်မနား ဆက်လုပ်သင်.တယ် .....
လို. ဦးပိုင်ဘက်က ... သာသာထိုးထိုး .. ပြောပေးပြီး
ဘုန်းဘုန်း တွေ မီးရှို.ခံရတာတော. ........ မျက်ကွယ်ပြု
ထေရ် ရ ၀ါဒ ဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံကြီး မှာ ဘယ်လိုတွေ ......
.... ဒါပေမယ်. ဗျာ ... ၀ဋ် ဆိုတာမသေခင် .. လည်ပါသ
တဲ. ၊ ၀ဋ်ဆိုတာ မယုံကြည် ၊ မကြောက် ကြသူများ ကို စောင်.